vidiyo - Xingtai Huimao Trading Co., Ltd.
Xingtai Huimao Trading Co., Ltd, bụ professinal emeputa na soplaya na akpaaka akụkụ ahụ mapụtara. Anyị factory emi odude ke Jvlu Industrial Mpaghara, Xingtai City, Hebei Province, ụtụtụ na n'ichepụta ubi nke roba akara akụkụ na akpakanamde mmanụ, dị ka mmanụ akàrà, O yiri mgbaaka, gaskets, bushes, wdg
Anyị factory ekpuchi ebe ihe karịrị 1300 square mita na nwere ọgaranya mmepụta ahụmahụ na ubi nke roba akara n'ihi na ihe karịrị afọ 20 kemgbe ya oruru. The ụlọ ọrụ nwere kneading ogbako, sọlfọ ịkpụzi omumuihe, refurbishment omumuihe, nkwakọ ogbako, refurbishment omumuihe, nkwakọ ogbako
Companylọ ọrụ anyị nwere ihe karịrị 20000 nke ebu na nnukwu nchekwa data, yana ahụmịhe zuru oke iji mesoo akàrà na mgbasa ozi dị iche iche na ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
Anyị bụ ndị OEM emeputa, mmepe nke akpaaka akụkụ ahụ mapụtara nyere site ahịa. anyị nwere ike inye oru chọrọ na oru nkwado maka ahịa mkpa.
Auto akụkụ ahụ mapụtara na onye-nkwụsị ọrụ, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, egbula kpọtụrụ anyị
Silicone Rubber Akara, Auto ngwa, Akara Nkebi, Mmanu mmanu, Control Ogwe aka Bushing, Akụkụ mapụtara,